Photos Transfer, Xiriirada, Video iyo Music ka iPod si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan music / video / sawiro ka iPod Touch si iPhone
Kala beddelashada xogta ka mid qalab macruufka ah sida iPod taabto si iPhone waa shaqo caadi ah in loo sameeyaa ayadoo dadka isticmaala maalin walba iyo sabab la mid ah waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo software oo loo isticmaali karo in arrintan la xiriira in la hubiyo in kala iibsiga waxaa loo sameeyaa hab siman oo joogto ah kaas oo sidoo kale waa Deg degtaa. In this tutorial siyaabaha fudud oo si sahlan xogta ka iPod gudbaayo iPhone waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan u weyn si loo hubiyo in user marnaba wajahaya arin kasta halka wareejinta macluumaadka u dhexeeya qalabka. Waxa kale oo xusid mudan in user uu leeyahay si ay u sameeyaan doorashada ugu fiican ee ku salaysan baahida iyo dalabaadka.
Qaybta 1aad: Sida loo wareejiyo music / video / sawiro ka iPod in iphone isticmaalaya Lugood
Qeybta 2: iPod Touch si iPhone wiht mid click
Qeybta 3: Sida loo noqon iPod taabto si iPhone
Waa habka fudud ee dhammaan kuwa u baahan tahay si ay u hubiyaan in heshiiska la sameeyo in si sax ah si la mid ah ay rabaan kaas oo sidoo kale micnaheedu tahay in photos ee isku si. Si aad u hesho natiijooyinka si fudud waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in tallaabooyinka ku xusan tutorial waxaa raacay talaabo talaabo si user ah tarayo faa'iidooyinka ka mid ah muuqaalada cabsi badan waxaa lagu soo bandhigay by Lugood ee arrintan la xiriira. Barnaamijkan software cajiib ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan files warbaahinta nooc kasta oo ka mid ah qalabka macruufka in kale iyo sidoo kale in ay Mac iyo PC. Waxa kale oo keydin karta oo warbaahinta in kaydinta in uu yimaado waa la dibna warbaahinta waxaa lagu synced karaa qalab Xararad ee ku sifayn kasta. Si aad u hubiso in Lugood waxaa si buuxda loo isticmaalay user ay u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. iPod taabto waa in lagugu xiro PC si loo hubiyo in nidaamka la bilaabay in si la mid ah sida loo baahan yahay.
Tallaabada 2.Once qalabka ayaa ku xiran user u baahan yahay si loo bilaabo barnaamijka Lugood ayaa lagu rakibay gal nidaamka. Waxaa lagu ogaan doonaan qalab si toos ah iyo user wuxuu sidoo kale hubin karaa in in qalabka uu ku yaal iyo weliba.
Tallaabada 3.On bar ugu sareeya user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nooca warbaahinta la xiriira la doorto sida lagu muujiyey jaantuskan hoose. Content ayaa kor u arbushin doonaa iyo user wuxuu sidoo kale hubin karaa in in content in ay tahay in lagu wareejiyo Lugood la doorto.
Tallaabada 4.The screen soo socda in booda yeelan doonaan fursado kala duwan oo ka user ay u baahan tahay in ay doortaan "Gacanta maamuli music iyo videos" ah.
Tallaabada 5.On shaashadda soo socda saraysa user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhanka codsan waxaa riixi si loo badbaadiyo isbedel iyo u dhameystiro heshiiska uu sidoo kale syncing warbaahinta. Geedi socodka halkan dhamaado sidoo.
Tallaabada 6.Using hab la mid ah ee kor ku user u baahan yahay in lifaaq iPhone in ay Mac / PC si loo hubiyo in Lugood ee lagu ogaado qalabka iyo markaas u baahan tahay in la hubiyo in warbaahinta oo uu soo synced dhex iPod la wareejiyo iPhone hab fudud oo ka kaaftoomi waa lacag la'aan jidka oo dhan. Isla tallaabooyinka saxda ah ee loo kor ku xusan waa in la raaco.
Qeybta 2: iPod Touch si iPhone Transfer- Wondershare MobileTrans
Waxaa shaki la'aan waa barnaamijka ugu wanaagsan ee software in laga heli karo suuqa iyo sabab la mid ah waxaa loo doortay by tobanaan kun oo dadka isticmaala oo dunida ah taasi oo tusinaysa caan iyo tartan guud ee software-ka. Geedi socodka waa inuu kan la raacay ayaa hoos ku xusan.
Tallaabada 1. barnaamij waa in ay la soo bixi URL http://www.wondershare.com/phone-transfer/ iyo ka dib ka dib markii su'aalo ah user u baahan yahay si loo soo dajiyo oo abuurtaan.
Tallaabada 2.Once ah iPod iyo iPhone ku xiran yihiin nidaamka button bilowga nuqul waa in la weeraray.
Tallaabada 3.Beerta suuqa kala socda tusi doono suuqa kala iibsiga ka mid qalab si kale oo aan wax dhibaato ah oo waxaa la sameeyey oo dhan ee kaliya click hal.
Tallaabada 4.By la isticmaalayo habkan user ka mid iPod wareejin karaan xogta si iPhone oo aan wax dhibaato ah.
Ugu danbeeyay iPod taabashada iyo sidoo kale iPhone waa ku dhowaad isku mid haddii qof uu doonayo in loogu badalo iPod in ay iPhone waa hawl dhab ah sahlan oo aan ku lug wax shaqo oo dhan. Dhammaan user u baahan yahay in la sameeyo waa in la hubiyo in barnaamijyadooda ugu fiican iyo sidoo kale qaar ka mid ah laga yaabo hardware dheeraad ah la geliyo si ay u helaan ujeedada waqti lahayn gudahood oo dhan. In iPod feature kaliya ee ka maqan waa in lagu daro waa codsi telefoon ku salaysan oo loo isticmaali karo in ay wacaan. Chine Kuwan waxaa loo yaqaan VoIP ama cod badan barnaamijyadooda IP oo lagu rakibi karo la click hal dhex app dukaanka Apple ee. Codsiga waxaa lagu ladhay ugu badan oo loo isticmaali karo in arrintan la xiriira waa Skype oo si xaqiiqo ah u baahan yahay Intro ma at dhan. Waxa intaa dheer in codsiga Line 2 codsiga waxaa sidoo kale sii caan ah oo ka mid ah dadka isticmaala iyo waxaa loo isticmaali karaa sida kale ah. Shuruudaha in ay yihiin in la fuliyo arrintan la xiriira sida soo socota:
2.Wi-Fi qalab la firfircoon xiriir. Internet SIM ama side ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa on dhaqaaqo.
headset 3.iPod kaas oo ka yimaadaa leh qalabka. Waxaa sidoo kale laga gadan karaa dukaan kasta oo tufaax.
4.a codsiga lagu ladhay in loo isticmaalo in ay wacaan. Inta badan barnaamijyadooda la mid ah ayaa sidoo kale la socotid SMS ama feature fariimaha. Habkaani waxaa loo isticmaali karaa sida kale oo u dhisay adeega SMS ah iPhone.
Marka ay timaado in faa'iidooyin ka dibna yihiin tiro badan tirada in ay suurtogal ma aha in ay liis gareeyaan oo dhan oo iyaga ka mid halkan, si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah kuwan waa sida soo socota:
1. lacag oo ka mid ah waa in ay bixiso wax iibsigu iPhone ah la badbaadin doonaa oo waa faa'iido weyn ee jeer oo dhan.
2.Beerta headset iyo sidoo kale qaababka kale ee ka shaqeeya si la mid ah si user ku raaxaysan kartaa waayo-aragnimo la mid ah ee ah iPhone.
dhaweynta gacanta ama side wac 3.Beerta arrimaha la xiriira ay ku haraan mar iyo waayo, kulli iyo sabab la mid ah internet joogto ah oo kaliya waa wax user a raadiyo waa.
Sida loo badbaadi Pictures ka iMessage in Computer ah
> Resource > iPhone Photos> Transfer, Xiriirada, Calendar, iMessage, Video iyo Music ka iPod in iPho